သင့်ကား ဆီစားနှုန်းကို အကောင်းဆုံး ချွေတာနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ ..!
ကျနော်တို့ လက်ထဲကို ကားတစီးရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ အမြဲတမ်း သူ့အတွက် သုံးနေရမယ့် စရိတ်ကတော့ ဆီဖိုးပါ။ ဆီစားများ တဲ့ ကားနဲ့ဆိုရင် နေ့စဉ်သွားလာစရိတ်က အများသုံး လိုင်းကားတွေရော အငှားတက္ကစီတွေ စီးရတာထက်ပါ ပိုမို ကုန်ကျနိုင် ပါတယ်။ အခု ကျနော်က ဆီစားနှုန်း...
Check Engine မီးလင်းလာရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းအချို့ ..!
ကားကွန်ပျူတာစနစ်ကိုယ်တိုင် မဖြေရှင်းနိုင်သော ပြစ်ချက်တစ်ခုခု ဖြစ်ပေါ်လာပါက Check Engine သင်္ကေတ လင်းလာပါသည်။ ပြစ်ချက်ကို သိစေရန် အထူးပြုလုပ်ထားသော Scanner ဖြင့် စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပြီး ကျွမ်းကျင်သော မက္ကင်းနစ်နှင့် ပြသပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Check Engine...
အော်တိုဂီယာနဲ့ မန်နျူရယ်ဂီယာ ၂ မျိုးမှာ အော်တိုက ကားမောင်းရ တဲ့လူ သက်သာတာကြောင့် ပိုပြီးလူ ကြိုက်များပါတယ်။ လူစီးကားတွေထဲ မှာ အော်တိုဂီယာပါတဲ့ကားတွေ များ လာပါတယ်။ လူစီးကားတွေထဲမှာ အော်တိုဂီယာပါတဲ့ကားတွေ များလာ ပါတယ်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး လူ...
မော်တော်တစ်စီး အစဉ်အမြဲအသင့်ဖြစ်နေ ရန်နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန် ပြုပြင်ထိန်း သိမ်းမှုဆောင်ရွက်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါ သည်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးကိစ်္စ တွေကြောင့် ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရတဲ့အလုပ် တွေကို...
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို လျှော့ချဖို့ လျှပ်စစ်ကားတွေ၊ ဟိုက်ဘရစ်ကားတွေ ဘယ်လောက်ထွက်လာတယ်ပဲပြောပြော ကမ္ဘာ ပေါ်မှာရှိတဲ့ ကားအများစုဟာ ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရဆဲပါပဲ။ စွမ်းအင်ရင်းမြစ်အတွက် ရုပ်ကြွင်းလောင် စာကို အသုံးချနေရတဲ့ ကားတွေဟာ...